Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 38)
Samsung Galaxy S5 Active ayaa si dhakhso leh suuqa u soo gali doonta
Iyadoo la sii daayo sawirka kiis kiiska Samsung Galaxy S5 Active waxaan u qaadan karnaa in taleefankan casriga ahi uu ku soo wajahan yahay suuqa
Samsung dareemayaasha biometric-ka ee bartamaha iyo heerka hoose ayaa dhowaan soo socda
Warku wuxuu noogu imanayaa in aaladaha Samsung ee biometric-ka laga hirgelin doono mustaqbalka dhammaan waddammada kala duwan ee dhexdhexaadka ah iyo dhammaadka hoose.
Nolosha Bulshada dhammaan Xperia
Waa codsi bilaash ah oo ay soo saartay shirkadda Sony kaas oo kuu oggolaanaya inaad hubiso dhammaan farriimahaaga Facebook, Tweets, iwm.
ZTE Kis 3, mid ka mid ah beddelka qiimaha Moto E
ZTE waxay hadda iibisay ZTE Kis 3 iibka Giriigga, mid ka mid ah qiimaha lagu beddelayo Moto E. Miyey awoodi doontaa inay iska celiso?
[APK] Samsung Galaxy S5 Music Player for Android kasta
Halkan waxaad kuheleysaa qaabka asalka udhashay Samsung Galaxy S5 Music Player si aad u soo dejiso ugana rakibto wixii Android ah
Sony waxay soo bandhigtay Sony Xperia M2, terminal leh astaamo aad u soo jiidasho badan oo runtii qiime macquul ah leh.
[APK] Ku rakib barnaamijka One Plus Gallery meel kasta oo ka mid ah galka Android
Halkan waxaad ku leedahay barnaamijka muuqaalka muuqaalka muuqaalka leh ee 'One Plus' oo si toos ah loogu soo dejisto apk iyo rakibidda wixii Android ah.
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa Mi Pad: 7.9-inji oo kiniin ah oo leh 2048 × 1536 qarash ah iyo Tegra K1 chip oo lagu qiimeeyay € 179
Mi Pad waa kiniinkii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Xiaomi' oo u yimaada gaar ahaan inuu la tartamo Apple iPad
Ku rakib Launcher Ultra Power Saving Mode of Samsung Galaxy S5 on your Android
Halkan waxaad ku leedahay Launcher for Android ah oo isku dayaya inuu u ekeysiiyo Launcher Ultra Power Saving Mode ee Samsung Galaxy S5.
Sony wuxuu soo bandhigayaa Xperia Z2 Compact gudaha Japan iyadoo loo yaqaan 'Xperia A2'
Xperia Z2 Compact ama Xperia A2 ayaa lagu soo bandhigay dalka Japan, oo ah terminaal raacaya heshiiskii Z1 ee ka koobnaa qaybaha uu ka kooban yahay.
5 sawir oo cusub oo ah Galaxy Tab S 10.5 kiniin ayaa soo muuqda
5 sawir oo cusub oo ah kiniinka Galaxy Tab S 10.5 ayaa u muuqda kuwa muujinaya wax yar oo dheeraad ah oo aan ka filan karno aaladda cusub ee Samsung
Ku soo degso SmartAlarm ee Samsung Galaxy S5 terminal kasta [APK]
Maanta waxaan idinla wadaagayaa codsi dhan oo ah Samsung daboolkeeda si ay uga dhex shaqeyso boosteejooyinka kale ee Android. Magaceedu waa SmartAlarm Samsung.
Faahfaahin ayaa ka dusay kiniin cusub oo Samsung ah oo ah 13.3-inji
Kiniiniga cusub ee Samsung ee 13.3-inji waa ereyo waaweyn marka la barbar dhigo 12.2-inch Galaxy Tab Pro
Sawirro cusub oo ah LG G3 ayaa ku daatay lacag iyo madow
Sawirro cusub oo LG G3 ah ayaa hadda la daabacay, terminal-ka xiga ee xiddig soosaaraha Kuuriya ee damacsan inuu u istaago Samsung S5.
Meizu MX3 hadda si rasmi ah ayaa looga iibsan karaa Spain
Halkan waxaad ku haysaa dhammaan faahfaahinta kuwa doonaya inay iibsadaan Meizu MX3 maaddaama laga heli karo iibsi meel kasta oo adduunka ah.
Samsung ayaa iftiin dheeraad ah ku shubaysa kamaradda Galaxy S16 ee 5MP
Kaamirada 16MP ee Galaxy S5 waxay bixisaa natiijooyin aad u wanaagsan gaar ahaan qaabkeeda HDR
Sony wuxuu ku dhawaaqay Xperia ZL2 Japan: 5 ″ shaashad, Snapdragon 801, kamarad 20.7MP iyo 3GB RAM
Sony wuxuu ku dhawaaqay Xperia ZL2 kaas oo iftiiminaya kamaradiisa 20.7MP, Snapdragon 801 iyo 5-inch shaashad, inkasta oo xilligan kaliya laga heli karo Japan
Naqshadeeyihii guud ee Samsung ayaa is casilay, isagoo u banneeyay Lee, shirkadda Kuuriya "Midas"
Naqshadeeyihii guud ee Samsung ayaa is casilay, isaga oo booskiisa u daayay Lee, "Midas" ee shirkadda Kuuriyaanka ah ee naqshadeeyay Galaxy-tii ugu horreysay
Szenio wuxuu soo saarayaa laba kiniin oo cusub oo 10.1-inji ah oo qiimo wanaagsan ugu fadhiya lacagta
Szenio wuxuu soo saarayaa laba kiniin oo cusub oo 10.1-inji ah oo lagu garto inuu leeyahay afar geesle afar geesle ah iyo naqshad wanaagsan oo cad
Huawei Ascend P7 ayaa lagu dhawaaqay
Waxay ku dhawaaqday Huawei Ascend P7 maanta, terminal soo bixi doona bishaan Maajo qiimo dhan 449 6 oo u imaanaysa sii wadida guusha Ascend PXNUMX
Haier wuxuu soo bandhigayaa noocyadiisa cusub ee 2014 hoose iyo kuwa dhexe
Taxane taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Haier' iyo kumbuyuutarro kala duwan oo soo bandhigaya xulashooyin kala duwan iyadoo loo eegayo baahida isticmaalayaasha, had iyo jeerna ku jira heer hoose iyo dhexdhexaad
Sawirada cusub ee Huawei Ascend P7 ayaa xaday
Sawirro badan oo ka mid ah shirkadda 'Huawei ascend P7' ayaa la sii daayay, casriga casriga ah ee Aasiya ee la soo bandhigi doono 7-da Maajo
Ma u qalantaa iibsashada taleefanka sare ee Android maalmahan?
Waxaan u maleyneynaa inaan aragnay wararka ugu muhiimsan suuqa .. Oo waxaan u maleynayaa in qiimaha uusan ka dhigeyn xilligan in la iibsado Android heer sare ah.
Soo bandhigida Huawei Ascend P7 waxay noqon doontaa 7-da Maajo magaalada Paris
Soo bandhigida Huawei Ascend P7 oo ku taal Paris bisha Maajo 7, taleefan sii socon doona soo kicinta Ascend P6
Miyay taleefannada casriga ah ee Huawei ay soo bandhigto ABC dhiirrigelin mudan?
Haddii aad horey u aragtay kor u qaadista mobilada Huawei ee ABC oo aadan ogeyn inay kugu habboon yihiin, maanta waxaan kaa caawinaynaa inaad ku go'aansato Androidsis falanqayntayada.
Kiniinka xayaysiinta ee ay bixiso El País ma u qalantaa?
Waa wax caadi ah in lagu arko xayaysiisyada tiknoolajiyada joornaalada. Xaaladdan oo kale, waxaan falanqeyneynaa iibsashada kiniinka 'i-Joy Blyss' ee ay ku bixiyaan El País.
Ma u qalantaa iibsashada mobilada Shiinaha?
Mid ka mid ah su'aalaha dhib ku haya macaamiil badan oo suurtagal ah ayaa ah ma u qalantaa iibsashada mobilada Shiinaha. Jawaabtu waa haa haa
Samsung waxay sharraxaysaa tikniyoolajiyadda cusub ee Galaxy S5
Shaashadda Galaxy S5 waa mid ka mid ah wanaagga ugu weyn ee calanka shirkadda Kuuriya
Waa maxay kamaradda ku taal HTC One M8 awood u leh? Jawaabta hoosta
Waxa kaliya ee aan sameyn karno ayaa ah inaan koofiyadeena u saarno tayada ay kamaradda HTC One M8 ku keydiso qabashadaas oo uu qaatay isticmaale IMGUR ah
Falanqaynta Sony Xperia Z1 Compact, oo ah terminaal heer sare ah oo u taagan cabbirka shaashaddiisa: 4.3 inji.
Sony ayaa ku cusbooneysiisa abka wehelisa Smartwatch 2 oo leh tafatiraha cusub ee 'Watchface', kalkuleytar iyo inbadan
Sony Smartwatch 2 cusbooneysiinta barnaamijka weheliya xisaabiyaha, tifaftiraha cusub ee 'Watchface', iyo waxyaabo kaloo badan
LG G3 sidoo kale waxay noqon doontaa mid aan biyuhu xirin
Xog cusub oo soo shaac baxday ayaa sheegaysa in LG G3 uu noqon doono mid biyo la’aan ah waxaana la xaqiijiyay inuu yeelan doono shaashad dhan 5.5 inji
Waa imisa qiimaha lagu iibiyo Samsung Galaxy S5?
Waxaa la shaaciyay qiimaha ay ku kacayso soo saarida Samsung Galaxy S5 natiijooyinkeeduna waxay tilmaamayaan inaysan gaarin 200 euro.
Ka hel Michael Jackson XSCAPE gabi ahaanba bilaashka isticmaalayaasha Xperia Z2
Sony waxay ku dhawaaqeysaa Michael Jackson cajaladiisa cusub ee 'XSCAPE Disc' waxay xor u noqon doontaa isticmaalayaasha Xperia Z2 iyo Xperia Z1
Sida dib loogu dajiyo miisaska Samsung ee biligleynaya, aalado kala duwan oo iswaafajiya
Qodobka soo socda waxaan ku tusayaa qalab naga caawin doona inaan dib u dhigno miisaanka nalka ee Samsung ee ku yaal boosteejooyinka sida Galaxy Note 3
Samsung waxay soo bandhigeysaa ganacsi loogu talagalay bilaabista caalamiga ee dhow ee Samsung Galaxy S5
Halkan waxaad ku leedahay ogeysiiska cusub ee Samsung ee munaasabadda daahfurka adduunka ee Samsung Galaxy S5, taas oo ah warka ah inuusan ku dhicin Apple.
LG G Flex, oo ah taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh shaashad jilicsan oo jilicsan, ayaa suuqa ka yimid shirkadda weyn ee Kuuriya.
Samsung waxay dib ugu laabanaysaa khilaafkii ka dhex jiray qaybta 'phablet' iyada oo ay la socdaan Samsung Galaxy Note 3, oo ah qalab heer sare ah oo leh naqshad soo jiidasho leh.
Samsung Galaxy Gear 2 Neo kuma xirmi doono Samsung Galaxy Note 3
Samsung waxay sii wadi doontaa inay wax qabato iyada oo si xarago leh u bilaabaysa terminalka iyagoon xitaa hubin inay si sax ah u shaqeynayaan, sida Samsung Galaxy Gear 2 Neo.
LG wuxuu ku guuleystey inuu boos ka helo qaybta casriga casriga sare mahadsanidiisa wanaagsan ...
LG G2 qaabka moodeelka ama sida loo hagaajiyo kaameradda LG G2
Kadib waxaan kaaga tagayaa inaad toos u soo dejiso qaabka kaamirada LG G2 oo si gaar ah u hagaajineysa kaamerada weyn ee LG G2.
Waxaan horey u haysanay xididka LG G2 ee xirmada Android kat
Waxaan horeyba u haysanay nidaam aan ku helno rukhsad rujin loogu talagalay LG G2 ee ku jirta Android Kit Kat.
Lenovo wuxuu ku dhawaaqay A-Series oo leh afar kiniin oo cusub
Lenovo waxay ku dhawaaqeysaa taxane taxane ah oo leh afar nooc oo kala duwan sida A7-30, A7-50, A8 iyo A10.
Samsung waxay guriga ka saareysaa daaqadda!, Hal milyan oo unug oo Samsung Galaxy S5 ah oo keliya 199 doolar
Waxaad haysataa 1 milyan oo unug oo Samsung Galaxy S5 ah $ 199 oo keliya. Miyaad seegaysaa?. Kaalay oo ka faa'iideyso dalabkaas weyn.
[APK] LG G2: Kala soo bax mawduuca rasmiga ah ee LG G Flex
Halkan waxaan uga tagayaa APK si toos ah u soo dejinta loogu rakibo LG G2 ee mawduuca rasmiga ah ee LG G Flex.
Sida xididka loogu helo HTC One M8 iyo M7 cusub
Marka xigta waxaan sharxayaa sida xididka loogu helo HTC One M8 iyo M7 qaab aad iyo aad u fudud.
Sida loo helo Root on Samsung Galaxy S5
Halkan waxaad ku haysaa tallaabooyinka aad raacayso si aad ugu hesho xididka Samsung Galaxy S5 nooca caalamiga ah ee SM-G900F.
HTC waxay soo bandhigtay HTC One M8 cusub, terminal leh astaamo iyo naqshad soo jiidasho leh runtii.
Sida loo rogo Android-kaaga Sony Xperia Z2
Halkan waxaad ku haysaa qaab aad ugu rogi karto Android-kaaga Sony Xperia Z2.
HTC waxay soo bandhigeysaa HTC One M8 cusub oo leh 5 801 shaashad, Snapdragon XNUMX chip, laba kamaradood, microSD iyo nashqadeynta birta
HTC One M8-ka cusub ayaa la soo bandhigay inyar ka hor iyadoo la siinayo chip Snapdragon 801, shaashad 5-inji ah, laba kamaradood iyo jir bir ah.
Isku day dhammaan codsiyada gaarka ah ee ay bixiso Samsung Galaxy S5 ee ka socda Android-kaaga
Halkan waxaad ku leedahay codsigan bilaashka ah ee Samsung ay rabto inay naga iibiso faa'iidooyinka qarsoon ee Samsung Galaxy S5.
Shirkadda Samsung ee Galaxy S5 ayaa lagu iibin doonaa qiimo ka jaban kii ka horreeyay
Samsung ayaa shaacisay in qiimaha Samsung Galaxy S5 uu ka jaban doono intii la filayay.
LG G2: Sida loo rakibo Soo-kabashada wax laga badalay ee Android 4.4.2 Kit Kat
Buuxi cashar tallaabo-tallaabo ah oo aan ku tusiyo sida loogu laabto Android 4.2.2 ee LG G2 si aad u awood ugu yeelatid cusbooneysiinta Android Kit Kat oo aadan lumin Soo-kabashada.
SDK waxay haysaa macluumaad kusaabsan barmaamijka cusub ee loo yaqaan 'Android Wear' oo ay maanta Google soo saartay.
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 illaa Android 4.4.2 Kit Kat adigoon lumin soo-kabashada wax laga beddelay
Halkan waxaan kuugu keenayaa casharro lagu cusbooneysiinayo LG G2-gaaga Android 4.4.2 Kit Kat iyada oo aan lumin xididka qaaliga ah ama Soo-kabashada wax laga beddelay.
Xaqiijiyay !!: Samsung Galaxy S3 waxay lahaan doontaa cusbooneysi rasmi ah oo ku saabsan Android Kit Kat
Laga soo bilaabo Samsung Saudi Arabia iyo boggeeda rasmiga ah ee Samsung waxaan ka helaynaa xaqiijinta rasmiga ah ee cusbooneysiinta Kit Kat ee Samsung Galaxy S3.
Soo dejiso barnaamijyada gaarka ah ee Samsung Galaxy S5
Halkan waxaan kaaga tagi karnaa apk-ka barnaamijyada gaarka ah ee Samsung Galaxy S5 si toos ah loogu soo dejiyo isla isla markaana loogu rakibo moodooyinka kale ee Samsung.
Samsung Galaxy S3 ayaa ugu dambayn yeelan doonta qalab rasmi ah oo loo yaqaan 'Android Kit Kat'
Ugu dambeyntii Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy note 2 iyo Samsung Galaxy Grand ayaa si dhuumaaleysi ah ugu soo galay liiska rasmiga ah ee wararka rasmiga ah ee Samsung ilaa Kit Kat.
LG wuxuu sii daayaa nambarka isha ee LG G2 Kernel Kit Kat. Soo-kabashada xigta ee wax laga beddelay aragga!
Sii deynta dhowaan ee rasmiga rasmiga ah ee loo yaqaan 'Kernel Kit Kat' ee LG G2 waa war wanaagsan tan iyo markii aan dhowaan heli doonno Dib-u-habeyn muddo dheer la sugayay.
Goorma ayaa la iibsadaa Samsung Galaxy S5?
Samsung Galaxy S5 ayaa si rasmi ah loo iibin doonaa bisha Abriil 11 iyada oo lagu iibin doono qiimo tafaariiqeed ah oo ku dhow 718 Euro.
Samsung Galaxy S5 oo gubaysa ka hor intaan la iibin
Shil ka dhacay mid ka mid ah warshadaha ka shaqeeya Samsung ayaa khatar gelin kara imaatinka Samsung Galaxy S5 ee dukaamada.
Halkan waxaan idinkaga tagayaa mahadsanidiin barnaamijka XDA oo ah codsigii hooyo ee boosteejooyinka HTC, HTC Music dabool si loogu rakibo wax kasta oo Android ah.
Sida loo rakibo Xperia Z2 Smart Call muuqaalka Xperia Z1 iyo Z1 Compact
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo rakibo shaqadan cusub ee Xperia Z2 ee loo yaqaan Smart Call ee Xperia Z1 iyo Xperia Z1 Compact
Codsiyada Akhristaha: Sida loo xidido LG G pro Lite maanta
Qeybtan cusub ee Codsiyada Akhristaha waxaan dooneynaa inaan ku bilowno cashar ku saabsan Root the Lg G pro Lite iyo Lite Dual.
HTC M8 sidoo kale waxay lahaan doontaa kiis caqli badan
evleaks ayaa hadda shaandheeyay buugga kiisaska casriga ah ee loo heli karo HTC M8-ka cusub.
Waa maxay mid ka mid ah awoodaha Samsung Galaxy S5? Kaameradaada
Sawirro taxane ah oo lagusoo qaaday Samsung Galaxy S5 ayaa la daabacay natiijaduna waa mid cajiib ah. Ku raaxayso kamaraddaada!
LG G2, dareenkeygii ugu horeeyay ee aan si rasmi ah ugu cusbooneysiiyo Android 4.4.2 Kit Kat
Halkan waxaan uga jawaabayaa su'aalaha qaar ee adeegsadayaasha ku saabsan cusbooneysiinta rasmiga ah ee LG ee LG G2 ilaa Android 4.4.2 Kit Kat.
Sidee loo cusbooneysiiyaa LG G2 model D802 ilaa Kit Kit Android
Nidaamkan, marka lagu daro inaan si rasmi ah u cusbooneysiinno LG G2 illaa Android 4.4.2 Kit Kat, waxaan sidoo kale si habboon uga tagi karnaa xididdada.
Huawei Ascend P6 wuxuu bilaabaa helitaanka Android 4.4.2 KitKat
Huawei Ascend P6 waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee hadda jira oo ugu wacan qiimaheeda weyn ee lacagta iyo qiimaheeda oo hooseeya.
Samsung Galaxy S5, haddii dareeraha faraha uusan ka hortageynin iibkiisa Abriil
Qaar ka mid ah ilo khaas ah ayaa tilmaamaya inay keenaan dhibaatooyinka dareeraha sawirka faraha ee Samsung Galaxy S5 cusub.
Sidee xasiliyaha sawirka ee LG G2 u shaqeeyaa? LG wuxuu ku sharaxayaa digaag
Fiidiyow xayeysiis xiiso leh halkaasoo ay noo muujinayaan sida xasiliyaha muuqaalka ee LG G2 u shaqeeyo
24-kii Febraayo, Sony waxay soo bandhigtay Sony Xperia Z2, oo ah shaqa-galka cusub ee shirkadda weyn ee reer Japan oo u taagan kamaraddeeda iyo processor-keeda.
Samsung waxay soo bandhigeysaa Samsung Galaxy S5 cusub, shirkadda oo ah banner cusub oo u taagan farta iyo dareenka garaaca wadnaha.
Jaangooyooyinka Samsung Galaxy S5 oo leh shaashad 5.2 inji ah ayaa la sifeeyey
Astaamaha qaarkood ayaa lagu soo daadiyay nooc ka mid ah Samsung Galaxy S5 oo leh shaashad 5.2-inji ah
Dhibaatooyin badan oo ku saabsan Samsung Galaxy Note 3, hadda dhibaatooyin ku saabsan meelaynta GPS
Dhibaatooyinka waxaa laga soo sheegayaa Samsung Galaxy Note 3 dadka isticmaala AT&T iyo suurtagal la'aanta ama cillad la'aanta GPS.
Samsung ma bilaabi doontaa nooc qaali ah Samsung Galaxy S5?
Samsung waxaa laga yaabaa inay diyaarsato nooca ugu sarreeya ee Samsung Galaxy S5 oo leh jir bir ah
Sida loo xidido loona rakibo barnaamijyada Google ee taxanaha Nokia X
Halkan waxaad ku haysaa casharro aan ku awoodi doonno inaan ku xididno Nokia X oo aan ku rakibno barnaamijyada Google ee asalka u ah sida Play Store ama Maps.
[PORT] Kala soo bax apk-ka biraawsarka Nokia X wixii Android ah
Halkaan waxaad ka heleysaa APK-ka biraawsarka ee noocyada kala duwan ee Nokia X ee loogu talagalay rakibidda wixii Android ah.
Sida loo hagaajiyo Samsung Galaxy S4
Handymen oo ku wanaagsan hagaajinta elektarooniga ayaa ku ogaan doona boostadayada, ilaha lagama maarmaanka u ah hagaajinta Samsung Galaxy S4.
Samsung, niyad jabkii weynaa ee MWC 2014
Samsung shaki la'aan waa niyad jab weyn oo ku saabsan daabacaadan dhowaan la soo gabagabeeyay ee MWC 2014, waana in shirkadda weyn ee caalamiga ah ay si aamusnaan ah ku sii martay Barcelona
Sida loo mideeyo dhammaan waxyaabaha ku jira iPhone-kaaga ama Android-kaaga Xperia-kaaga cusub adigoon ku dhiman isku dayga
Xperia Transfer waa tiknoolajiyad cusub oo Sony ah oo noo oggolaaneysa inaan u wareejino wadarta guud ee iPhone ama Android kale qalabka cusub ee Xperia.
Samsung Galaxy S5: Heerka Wadnaha, Hal-abuurka Samsung?
Markii ay soo saaruhu soo bandhigeen Samsung Galaxy S5 waxay muujisay qalabkeeda garaaca wadnaha. Laga soo bilaabo Androidsis waxaan kala bixinaynaa hal-abuurnimadii loo malaynayay
MWC 2014, Huawei Ascend Mate2, waa muuqaal aad u xiiso badan oo fiidiyoow ah
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa raadinaya shaashad jaban oo Huawei ay leedahay xalka soo bandhigida Huawei Ascend Mate2
MWC 2014, Samsung Galaxy S4 Black Edition oo ku jirta gacanta Androidsis
Androidsis wali waxay kujirtaa Samsung istaag markan si loo tijaabiyo noocyada ama nooca cusub ee Samsung Galaxy S4 oo sifiican loo yaqaan Samsung Galaxy S4 Black Edition.
Alcatel wuxuu ku dhawaaqay PIXI 7 kiniin qiimo jaban ku fadhiya for 79
Alcatel waxay ku soo bandhigtay MWC 2014 kiniin cusub oo la yiraahdo PIXI 7 kaas oo la imaan doona Android 4.4 KitKat qiimo jaban oo ah € 79.
MWC 2014, waxaan tijaabinay Samsung Galaxy Gear 2
Dib-u-eegista Fiidiyowga ee Samsung Galaxy Gear 2, Samsung-kii ugu dambeeyay ee Smartwatch oo si rasmi ah loogu soo bandhigo 2014 WC ee Barcelona.
Infographic wuxuu isbarbar dhigayaa Galaxy S5 kuwii kahoreeyay
An infographic oo muujinaya isbeddelka qoyska Galaxy S iyo halka Galaxy S5 uu raacayo wixii ka horreeyay iyada oo leh tayo yar yar.
MWC 2014, Samsung waxay soo bandhigaysaa Samsung Galaxy S5
Ugu dambayntii Samsung waxay soo bandhigtay Samsung Galaxy S5, terminal-ka cusub ee xiddig ee shirkaddu ay doonayso inay kula tartanto miisaannada culus sida Sony.
MWC 2014, Sony Xperia Z2 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Ugu dambeyntii Sony Xperia Z2 cusub ayaa la soo bandhigay. Qalab la kulma filashooyinka, in kasta oo ay ku celiso naqshaddii ka horreysay
Akhriso majaajillada aad jeceshahay labadan barnaamij ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android
ComicRack iyo Perfect Viewer waa laba codsi oo waaweyn oo lagu akhriyo majaajillada aad ugu jeceshahay kiniinkaaga ama casrigaaga.
Sida loo rakibo WhatsApp kiniinka Android oo leh kaliya WiFi
Haddii aad haysatid kiniin Android ah oo aan lahayn taleefanka gacanta, taas oo ah, 3G la'aan, oo aad rabto inaad ku raaxaysato WhatsApp, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo iyadoo la adeegsanayo casharro.
Sunstech uSUN200 waxaan haynaa furitaanka iyo dib u eegida taleefankan casriga ah ee asalka Isbaanishka ah
Dib-u-eegidgan fiidiyowga ah waxaan ku soo bandhigeynaa dhammaan faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka Sunstech uSUN200 terminal.
Qalab cusub oo Android 4.3 ah oo loogu talagalay Xperia Z, ZL, ZR iyo Tablet Z oo leh horumarin xagga batteriga, Bluetooth iyo waxyaabo kale oo badan
Dadka isticmaala Xperia Z, ZL, ZR iyo Tablet Z waxay heli doonaan nooc cusub oo ah Android 4.3 oo leh lambar dhismo 10.4.1.B.0.101 saacadaha soo socda.
Beta buskudka smartwatch appstore wuxuu ka dhigayaa muuqaalkiisa Android
Laga soo bilaabo halkan waxaad ka soo dejisan kartaa beta-ka dhagxaanta casriga ee 'smartwatch appstore'. In kasta oo ay leedahay dhibaatooyin dhowr ah, waad bilaabi kartaa soo degsashada barnaamijyada.
Kiiboodhka ugu fiican kumbuyuutarkaaga Samsung Galaxy Tab 3
Waxaan ka soo qaadaneynaa dallacsiin gaar ah ElectroMedia ee kumbuyuutarka loogu talagalay Samsung Galaxy Tab 3 oo leh Bluetooth 3.0.
Sida loo xidido MAX 4 3G si fudud
Casharka soo socda waxaan ku sharxayaa sida loo xidido MAX 4 3G si aad u fudud oo aan loo baahnayn PC.
TeamViewer QuickSupport wuxuu fidiyaa helitaanka fog ee telefonada Lenovo, Asus iyo Caterpillar iyo kiniiniyada
TeamViewer QuickSupport hadda sidoo kale waxay taageertaa qalabka Asus, Lenovo iyo Caterpillar iyadoon loo baahnayn inay xidid xidid noqdaan.
Dib u eeg MAX 4 3G, oo ah saldhig laba afleyn Isbaanish ah oo Android ah iyo Android 4.2.2 oo loogu talagalay 89 Euros
Halkan waxaan kaaga tagayaa Dib-u-eegista dhammaystiran ee MAX 4 3G, oo ah terminal asal ahaan Isbaanish ah oo keliya 89 Euros oo ku habboon inuu nagu bilaabo adduunka Android.
Si toos ah uga soo dejiso waxyaabaha ku jira YouTube-ka taleefankaaga casriga ah ama 'Tablet'
OGYoouTube waa nooc ka mid ah barnaamijkii You Tube ee asalka ahaa kaas oo lagu soo daray qaababka sida soo degsashada tooska ah ee kanaalka.
Kiniiniga Samsung Galaxy Tab 3 Lite ayaa hadda rasmi ah
Kumbuyuutarka Samsung ee 'Tab Tab 3 Lite' horeyba wuu rasmi u yahay, runtiina waxba kama taagna, illaa qiimaha, aan weli la garanayn, uu yahay barta ugu muhiimsan.
Kiniiniga qiimaha jaban ee Galaxy Tab 3 Lite ayaa lagu xaqiijiyay buugga isticmaalaha
Buugga isticmaalaha ee kiniinka Galaxy Tab 3 Lite ayaa la soo daadiyay wuxuuna xaqiijinayaa muuqaalka soo socda ee qalabkan qiimaha jaban ee Samsung.
Shanta barnaamij ee ugu fiican kiniiniyada
Shanta codsi ee ugu fiican ee kiniiniyada oo ah kuwa qasab ah in lagu rakibo kiniiniyadaada.
Polaroid wuxuu soo bandhigayaa khadka Q ee kiniiniyada leh quad-core chips iyo Android 4.4
Polaroid wuxuu si dhab ah u galayaa Android isagoo wata taxanaha Q ee kiniiniyada qiimo jaban iyo tayo muhiim ah qeybaheeda.
Kiniiniga DreamWorks iyo Fuhu ee loo yaqaan DreamTab oo lagu muujiyo CES 2014
Kiniinka 'DreamWorks DreamTab' wuxuu xambaari doonaa dhammaan astaamaha caanka ah iyo kuwa firfircoon ee ka socda filimadaaga xiisaha leh ee caanka ah sida Shrek ama The Croods.
3-da kiniin ee ugufiican ee Android ee bixiya Kirismaskan 2013
Saddexda kiniin ee ugu fiican Android si aad u siiso Kirismaskan kuwa aad jeceshahay sida Nexus 7, LG G Pad iyo Sony's Xperia Tablet Z
Kiniinka ugu horreeya ee qaybsan ee la abuuray waa Isbaanish waxaana loo yaqaan 'Click ARM'
Riix ARM waxaa abuuray imasD, shirkad Isbaanish ah oo noqonaysa tii ugu horreysay adduunka ee sameysa kiniin qaabaysan.
Vexia waxay kiniiniyadeeda ku soo bandhigeysaa Intel chip: Zippers Tab 7,8i iyo Zippers Tab 9i
Vexia waxay soo bandhigeysaa aaladaha Android oo leh guntin Intel ah oo caloosha ku jirta sida Zippers Tab 7,8i iyo Zippers Tab 9i.
Xiriirka Sixirka ee Vexia waa mid ku hadla "sixir" ku hadlaya taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga
Magic Contact waa ku hadla oo ay soo saarto shirkad Isbaanish ah oo la yiraahdo Vexia taasina waxay noqon kartaa qalab ku habboon in la bixiyo Kirismaska.
DoubleTwist waxaa loo cusboonaysiiyay kiniiniyada iyo Android 4.4 KitKat
DoubleTwist waa muusig weyn oo muusig ah oo dib loo cusbooneysiiyay si loo muujiyo interface kale isla markaana loo siiyo taageero Android 4.4 KitKat
Opera browser ee loogu talagalay Android loogu talagalay kiniiniyada nooca cusub
Opera waa mid ka mid ah xulashooyinka waa weyn ee aad heysato markii aad dooraneyso biraawsar shabakadeed ee loogu talagalay Android, haddana waa la cusbooneysiiyay iyada oo lagu hagaajinayo kiniiniyada
Qaybta «loogu talagalay kiniiniyada» oo lagu soo bandhigay Google Play Store
Haddii aad haysatid kiniin, laga bilaabo maalmahan waxaad awoodi doontaa inaad gasho qaybta gaarka ah ee Google Play Store, oo markaa waad arki kartaa codsiyada ugu fiican.
Wolder wuxuu bilaabayaa miTAB YUMMY, oo ah kiniin gaar ah oo loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta
MiTAB YUMMY waa kiniin loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta € 89 iyo alaab Isbaanish ah, taas oo kaabi doonta waqtiga firaaqada iyo waqtiga waxbarashada ee carruurtaada.